Umzekeliso weQumrhu: Funda indlela yokwenza isiKhokelo seSimbo seVector | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umzekeliso wequmrhu ngulowo usetyenziselwa ukwenza ii-logo, ii-brand, iibhena kunye nayo yonke into enxulumene nokuchongwa kwenkampani.
Indlela yokuchonga uphawu lwenkampani yakho usebenzisa i Umzekeliso wobumbanoKungenxa yelogo, umfanekiso, imilo, umyalezo, njl. ukubaluleka komsebenzi obonakalisa impumelelo, icingisiswe kakuhle kwaye yaphuhliswa yingcali eqeqeshwe kakhulu.
1 Ungawufezekisa njani owona mzekeliso ubambekayo?
2 Yenza isikhokelo setayile ye vector
3 Ngawaphi amanyathelo onokuwathatha?
4 Yiyiphi incwadi yabaphulaphuli ejolise kuyo?
5 Yeyiphi iphrofayili encinci ekufuneka umfundi ayiphathe?
Ungawufezekisa njani owona mzekeliso ubambekayo?
Umbono kukuba lo mfanekiso vusa umdla woluntu oludlayo, evuselela ingqondo yakho kwaye ingene kuyo ukuze ikhunjulwe kwixesha elizayo, ukuze ibonakalise imveliso oyithandayo yabathengi kwaye ke, iyayincoma kwaye uyithenge. Iimpawu ezimelwe kule mizekeliso zisekwe kumbono wokuqala onayo inkampani, ethi Uhambisa umbonisi okanye uyilo kufuneka iphuhliswe phakathi kwamaqela omabini.
Ngeli xesha siza kusebenzisa izindululo ze Umzobi wobugcisa uMauco Sosa, ukufezekisa kungekuphela nje ukuphucula njengomzobi, kodwa ukuphuhlisa eyakhe kunye nesitayile esitsha, konke ngokusebenzisa Isikhokelo sesimbo sevector Esiza kuthi sazise malunga nayo.
Yenza isikhokelo setayile ye vector
Kuya kufuneka uthathe uhambo nge ezahlukeneyo vector aesthetics ukunceda umsebenzisi achaze isimbo sakhe, abanike izixhobo zokwenza imifanekiso yabo edibanisa iindlela ezahlukeneyo zemizobo.
Ngawaphi amanyathelo onokuwathatha?
Okokuqala, uMauco ubonakalisa umsebenzi wakhe kwaye ucacisa umzi mveliso ngokwembono yakhe kunye nemfuno yakhe yoyilo.
Okwesibini, ichaza umbono wakho wenyathelo lomzekeliso lwenkampani, ukuyaphula ngokupheleleyo ukuze iqondwe kakuhle nangokusemandleni. Ke kusemandleni akho ukuzama ukwenza isitayile esitsha ngendlela emiselweyo yokunceda ukukunceda.
Umsebenzisi uya kufunda isigqibo ngonyango kunye nombala, eza kuthi zinike indlela yokusebenza kubume befom, amanqaku ahlukeneyo okujonga kunye nenqanaba lokukhutshelwa elinalo umzekeliso, ezi zigqibo zibalulekile ekudalweni komzekeliso wequmrhu.
Okokugqibela, baya kunikwa uthotho lweengcebiso eziya kunceda umzobi asombulule izinto ezintathu ezisisiseko ezi: Ukukhanya, abalinganiswa kunye nokwakhiwa.
Injongo yolu khenketho kukuba umbonisi aphuhlise uvavanyo lwesimbo oluthandayo, oku kuyakusetyenziselwa ukwakha ilizwe lobuqu kwindawo encinci apho ekugqibeleni yila ubuchule bakho kunye nengcinga, oku kuba yinjongo yekhosi.
Yiyiphi incwadi yabaphulaphuli ejolise kuyo?
Ngokomgaqo iingcali zemizekelo, uyilo kunye noyilo lwegraphic, kodwa iyafikeleleka kubantu abaneengcinga ezisisiseko malunga nomzekeliso kunye kwabo bafuna ukufumana ezinye iindlela ngenxa yokuphucula ubuchule bakho.
Yeyiphi iphrofayili encinci ekufuneka umfundi ayiphathe?
Kukhethwa abantu abanolwazi olusisiseko lokuzoba kwaye kubaluleke kakhulu ukuba bayazi ukuphathwa kweenkqubo zevector; Ukuba unayo nethebhulethi yakho yemizobo ekhoyo, iya kuba luncedo kakhulu.
Njengoko uza kubona, incwadana ithembisa ukushiya iimfundiso ezinkulu neziluncedo eziya kuvumela ababonisi, izinto eziyilayo kunye nabayili yenza imifanekiso ehlanganisiweyo ngokutyibilikayo nangobuchule, phakathi kwezinye izinto, ngexabiso elongeziweyo lokubeka isitayile sakho kuyilo ngalunye.
Umzobi Mauco Sosa unolwazi kwi Isikhokelo sobugcisa, i-Infographics kunye noMzekeliso weNkampani kunye namava amahle njengomyili, ikhathuni, upapashe iincwadi, usebenze kuhlelo lweemagazini zenkcubeko, wenze imiboniso kubugcisa beli xesha kunye nokurekhoda iifilimu ezimfutshane; Ewe, ikwangumzekelo, esenza umsebenzi obalulekileyo womzekeliso iimveliso ezinje ngeBBVA, CBRE kunye neTelefonica.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Umzekeliso weNkampani: Funda ukwenza iSikhokelo seNdlela ngeNyathelo ngeNdlela yeVector
Ulibale ukufumana ii-3Bs kuyilo lwegraphic: Kulungile, kuhle kwaye kungabizi